Nagarik Shukrabar - घातक चिन्ताबाट कसरी मुक्त हुने ?
शनिबार, ३० असोज २०७८, ०५ : ३६
बिहिबार, ०६ जेठ २०७३, ०२ : २२
उखानै छ– चिन्ताले चितामा पु¥याउँछ । यद्यपि, चिन्ता आफैँमा रोग होइन । तर, यसले थुप्रै शारीरिक तथा मानसिक रोगलाई जन्म दिने भएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि यो घातक मानिन्छ ।
चिन्ताले गर्ने हानि
चिन्ता र तनाव लिने व्यक्तिमा क्यान्सर, फोक्सोसम्बन्धी रोग, लिभर सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेहजस्ता रोग लाग्ने जोखिम बढी रहेको विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
चिन्ता लिने कतिपय व्यक्ति जति खाए पनि अघाउँदैनन् । एउटा अनुसन्धानले देखाएअनुसार त्यस्ता मानिसले ४० प्रतिशत बढी खाना खाने गर्छन्, जसले गर्दा शरीर थसुल्लो पल्टिन्छ ।
सधँै चिन्तामा रहने व्यक्तिको शरीरमा नयाँ कोषिकाको विकास ढिलो हुन्छ, जसले गर्दा व्यक्ति चाँडै बूढो देखिन्छ । छालामा चाउरी पर्ने, मांसपेशी कमजोर हुने, आँखा कमजोर हुनेजस्ता बुढ्यौलीका संकेत चाँडै देखा पर्छन् ।
– भिन्डीमा पाइने भिटामिन–सीलगायत तŒवले दमको असर कम गर्छ ।
– भिन्डीमा अक्सिडेन्ट्स, भिटामिन–सी, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, आइरनजस्ता तŒव प्रशस्त मात्रामा पाइन्छन्, जसले शरीरको रोगप्रतिरोधी क्षमता बढाउँछन् ।
– भिन्डीमा क्षार तŒव पाइन्छ, जसले अल्सरको असरलाई कम गर्न मद्दत पु¥याउँछ ।
सेक्सअघि के नगर्ने ?
एलर्जीको औषधि नखाने
सेक्सअघि औषधि खानाले यौनरस कम निस्किन्छ, जसले सेक्सलाई पीडादायक बनाउँछ । एलर्जीको औषधि लिने गर्नुभएको छ भने सेक्सको मज्जा लिइसकेपछि मात्रै लिने गर्नुस् ।
मसलायुक्त खानाले पेट ढुस्स हुन्छ । ढुस्स पेट लिएर सेक्समा उत्साहजनक रूपमा सरिक हुन सकिँदैन । त्यही भएर हल्का खाना खाएर सेक्समा सरिक हुनुपर्छ । मसालेदार खानाले योनीमा नराम्रो गन्ध सिर्जनासमेत गराउने विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् ।
हल्का मदिरा खाँदा मुडमा आउन सजिलो हुन्छ । तर, बढी खानुभयो भने यसले ओछ्यानमा तपाईंको क्षमता घटाइदिन्छ ।
सेक्स पार्टनरलाई आकर्षित गर्न महिलाहरूले सेक्सअघि हात, खुट्टा, योनी आदिका रौँ खौरिने गर्छन् । तर, सेक्स गर्नुभन्दा एक दिनअघि यस्तो सेभ गर्नुभयो भने सेभका कारण उत्पन्न एलर्जी र लागेको घाउ भोलिसम्म निको भइसकेको हुन्छ ।
काँचो लसुन–प्याज खाँदा मुख गनाउँछ । गनाउने मुखले सेक्सका क्रममा उत्तेजना र रोमाञ्चक अनुभूति घटाइदिन्छ । त्यही भएर लसुन–प्याज खाएर सेक्स गर्न नजाने । खाइहालेमा ल्वाङ, सुकुमेल आदि चपाउने गर्नुपर्छ ।